ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၉-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၉-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ဧရာဝတီတိုင်းအနှံ့ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲမည်ဟု လယ်သမားသမဂ္ဂ ပြော click
- နိုင်ငံတကာရှေ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမည်ဟု ကချင် ပြော click
- နိုင်ငံရေး အာမခံချက်မရှိဘဲ အပစ်ရပ် လက်မှတ်မထိုးသေးရန် KIO ကို ကချင်အဖွဲ့များ အကြံပြု click
- ကေအိုင်အို တောင်းဆိုချက် လူထုသဘောထားနှင့် ကိုက်ညီ click
- KIO ၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောထားအပေါ် ကချင်လူထု၏ ဆန္ဒ click
- သီးခြား ကချင်နိုင်ငံ တည်ထောင်ရန် KNO ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် click
- TNLA ဒေသ၌ အစိုးရ စစ်ဆင်ရေး တိုးမြင့်လာခြင်း click
- မတ်လနှင့် ဧပြီလအထိ ပလောင်ဒေသအတွင်းတွင် မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်မှ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အခြေအနေ click
- ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ညီညွတ်ရေး ကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း click
- လားရှိုးမြို့တွင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွား၊ ညမထွက်ရအမိန့် ချက်ချင်းထုတ်ပြန် click
- လားရှိုးမှာလည်း အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပြန်ပြီ click
- လားရှိုးမြို့တွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ထပ်မံဖြစ်ပွား click
- လားရှိုးတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်၊ အဆောက်အအုံနှင့် ဆိုင်ခန်းများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ click
- လားရှိုး မွတ်စလင်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ click
- လားရှိုးသတင်းယူနေသည့် ရုပ်သံသတင်းသမား ၂ ဦး တိုက်ခိုက်ခံရ click
- လားရှိုးမြို့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှု (ဓာတ်ပုံ) click
- လားရှိုးပဋိပက္ခ မူဆယ်သို့ ကူးစက်မည်ကို ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေ click
- မိတ္ထီလာဒုက္ခသည်များ အိမ်နေရာ ပြန်ရရေး မသေချာသေး click
- မကွေးတွင် သိမ်းဆည်းခံ တောင်ယာမြေများ ပြန်ရရေး တောင်းဆို click
- မြေသိမ်းမှု၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုများအတွက် အစိုးရတပ်က ကရင်တပ်ဖွဲ့များကို သတိပေး click
- မြေသိမ်းမှု၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကရင်တပ်ဖွဲ့များကို အစိုးရ သတိပေး click
- ရွာလုံးကျွတ် ရွှေ့ပြောင်းခံ ကချင်ဒေသခံများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး မလုပ်နိုင်သေးဟု ဆို (ရုပ်သံ) click
- ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြေသိမ်းထားမှုများ ကာလပေါက်ဈေးဖြင့် လျော်ကြေးပေးရန် ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြမည် click
- ရပ်ကွက်ပိုင်မြေ ပြန်ရရေး လွှတ်တော်အမတ် ဦးဆောင်ဆန္ဒပြမည် click
- ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရုံးမြေကို ရပ်ကွက်သားများ ပြန်ရရေး အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဆန္ဒပြမည် click
- ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အရေးယူရန် တောင်ဥက္ကလာပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည် click
- ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အိမ်ရာကွက်သစ် ဖော်ထုတ်သူ ၁ဝ ဦး ထောင်ချခံရခြင်းအတွက် အယူခံဝင်မည် click
- WENG HONG HUNG GARMENT စက်ရုံ ဆန္ဒပြအလုပ်သမားများ အလုပ်ပြန်ဆင်းတော့မည် (ရုပ်သံ) click
- ဆွဲတင်စစ် စီမံချက် အဓိကရုဏ်း ရုံးတင် click
- ဖယ်ရှားခံ အရာထမ်းများ နေရာတွင် လူသစ်များ အစားထိုးခန့် click
- နေပြည်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီအဖွဲ့ ဘားအံမြို့ တရားရုံးကို လာရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေး click
- ဆီးဂိမ်းမတိုင်မီ ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ် click
- ရဲတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ လုံခြုံရေးသင်တန်း ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ဖို့ ကုမ္ပဏီ ၂ ခု လက်မှတ်ထိုး (ရုပ်သံ) click
- ကလေးများ အဓမ္မပြုခံရမှု များလာသဖြင့် အကာအကွယ်ပေးမည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန် လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်မည် click
- အများမျှော်နေတဲ့ SME ဥပဒေ ဇွန်လထဲ ထွက်လာဖွယ်ရှိ click
- အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှု မီဒီယာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဦးရဲထွဋ်ကို မေးမြန်းချက် (အသံ) click
- စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်သို့ ချီတက်ရာဝယ် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ရွာခရိုးက ရွှေချိုးကူသံ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ကိုယ့်နေရာ ကိုယ် ပြန်ရပြီကွ (ကာတွန်း) click
- မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့် မိုးသက်လေပြင်း ကျရောက်နိုင် click
- ကရင်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တွင် ယခုနှစ် သွေးလွန်တုတ်ကွေး စောစီးစွာ အဖြစ်များနေ click
- ကရင်ပြည်နယ်တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကူးစက်မှု ဆက်လက် တိုးပွားနေဆဲ click
- စက်မှုဇုန်များ မီးပြတ်နေမှု ဖြေရှင်းပေးမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ ကတိပြု click
- စစ်တွေ ဘီလူးမချောင်းကို ကျပ်သန်း ၆၀၀ ကျော် အကုန်အကျခံ ပြုပြင်မည် click
- နိုင်ငံမဲ့ မဖြစ်ရေး သန်းခေါင်စာရင်းသွင်းကြရန် ရှမ်းအလုပ်သမားများကို တိုက်တွန်း click
- နိုင်ငံခြားသား တည်းခိုရန် Home Stay အတွက် စနစ်တကျဖြစ်ရန် လို click
- ဒေါ်လာကြောင့် ကုန်စည်ဈေးတက် click
- မြန်မာ့ဆန် ဥရောပတွင် ဈေးကွက် ဆက်ချဲ့ click
- တရုတ်ဆန်များတွင် ကက်ဒ်မီယံဓာတု ပါဝင်မှု မြင့်မားနေကြောင်း တွေ့ရှိ (အသံ) click
- သုံးခွမြို့နယ်တွင်း မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် လယ်ယာမြေအချို့ ပျောက်ဆုံး click
- အုပ်စုနှစ်စု ပြိုင်ဆွဲသည့် ဘူးသီးတောင် လေလံပွဲ ပြည်နယ်အစိုးရ ကြားဝင်ရ click
- မွန်ပြည်နယ်တွင် ဖမ်းမိထားသည့် လိုင်စင်မဲ့ကားများ လေလံတင် ရောင်းတော့မည် click
- မြင်နိုင်စွမ်း ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထက် ကားမှန်အနက်များ တပ်ဆင်အသုံးပြုခွင့်ပေး click
- ကြွပ်ကြွပ်အိတ် အသုံးပြုမှု လျှော့ချရေး လောင်းချောင်းကျေးရွာတွင် ပြုလုပ် click
- ဈေးနှုန်းတိုးလာတဲ့ နေပြည်တော်စည်ပင်ရိပ်သာ (ပေးစာ) click
- ၈၅ ကြိမ်မြောက် မြောက်ဦး သျှစ်သောင်းဘုရားများ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး click
- စိန့်မေရီ ဘုရားကျောင်း တာဝန်ခံက ရဲတိုက်ကို စတိုက်ခိုက်ခြင်း မဟုတ်ဟု ငြင်းဆို click
- Hpawt….. Ni ကချင်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးဇာတ်ကား သြဂုတ်လတွင် ပြသမည် click
- ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံ ဇာတ်ဝင်ခန်းပါ ရုပ်ရှင် အလိမ်မခံရအောင် ဖန်တီးတာဟု ဆို (ရုပ်သံ) click
- သန်လျင် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားနှစ်ဦး ဓားထိုးခံရ click
- ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ မြန်မာ ဘ/ကကျောင်းကို အဝတ်အထည်နဲ့ ကွန်ပျူတာများ လှူဒါန်း (ရုပ်သံ) click
- အစိမ်းရောင် နယ်နိမိတ်မျဉ်း ပါးပါး (ဆောင်းပါး) click
- ခလုတ်မှန်သမျှ သီချင်းဖြစ်ပါစေ (ဆောင်းပါး) click
- ၂၇ ကြိမ်မြောက် SEA Games Myanmar အတွက် ဂုဏ်ပြုသီချင်း (ရုပ်သံ) click
- ယုံကြည်မှုကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ၁ သိန်း နှစ်စဉ် သေဆုံးနေရ click
လူအချင်းချင်း လှည်.ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ ။
....... SEA GAME စည်ကားဖို. ရန်ကုန်
မှုာ အချို. အားကစား ပွဲများ ( ကြက်တောင် ၊ ပင်ပေါင် ၊
ရေကူး ၊ ဘော်လီဘော ) စသည်ဖြင်. ကစားပွဲ တ၀က်လောက် ကစားဖို. ကြို စဉ်းစားသင်.ပါတယ် ၊
... မဟုတ်ရင် SEA GAME သမိုင်းမှာ အခြောက်ကပ်ဆုံး
Sea Game ကစားဖို့ ပြောနေတယ် တကယ်တန်းရက်တွေ တွက်ကြည့်
တော့ ၂၀၀ ရက်တောင် မလိုတော့ဘူး ။
ဖြတ်သန်းမယ့် မြို့ တွေက စုတ်ပြတ်နေတာပဲ။
အခုမိုးရာသီမှာ ပန်းအလှပင်တွေ သေချာစိုက်သင့်ပြီ။
အထူးသဖြင့် နယ်စပ်ရေးရာအောက်လိုလို တိုင်း/ ပြည်နယ်
အစိုးရအောက်လိုလိုနဲ့ အနေအစား ချောင်စွာနဲ့ ပြည်သူအခွန်ငွေကို
တိုင်း/ပြည်နယ် စည်ပင်ဝန်ကြီးတွေက ဥပဒေ Bye Laws တွေ သေချာ
ဖတ်သင့်ပါတယ် မြို့သာယာလှပရေး ၁၆ ချက်အတိုင်း အလုပ်တွေပြီး
မြို့ဝင်ဆိုင်းဘုတ်တွေ မလှတော့ဘူး ပန်းခြံ တွေကလည်း မြက်ခြံ တွေ
ဖြစ်နေပြီ မြို့ ထဲမှာ ဗွက်အိုင်နဲ့ လမ်းပေါက်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်။
ရေမြောင်းတွေကလဲ အမှိုက်နဲ့ ပြည့်နေတယ်
နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပြသဖို့ လုပ်ထားတဲ့ နေရာတွေ ကြိုပြင်သင့်ပါပြီ
ဖြစ်ကတတ်ဆန်းလုပ် တတ်တဲ့ တချို့သော စည်ပင်ညွှန်မှုး နဲ့ အမှုဆောင်
အရာရှိတွေ့ ကြောင့် နိုင်ငံခြားသားများ အထင်သေးနိုင်ပါတယ်
ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အားကောင်းစွာနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်နေပြီ။